Iza no tsy hankasitraka ny vaksinina Rosiana COVID-19 amin'ny fandikan-dalàna amin'ny famokarana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Iza no tsy hankasitraka ny vaksinina Rosiana COVID-19 amin'ny fandikan-dalàna amin'ny famokarana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Notaterin'ny OMS teo aloha fa nahita fandikan-dalàna marobe izy ary nanana ahiahy mifandraika amin'ny “fampiharana ny fepetra sahaza mba hanalefahana ny risika amin'ny fandotoana hazo fijaliana” ao amin'ny orinasa Farmstandard ao Ufa, tanàna Rosiana.
Miato ny fankatoavana vonjy maika ny vaksinin'ny Sputnik V COVID-19 vita Rosiana.
Nahita fanitsakitsahana famokarana maro tao amin'ny orinasa mpamokatra entana any Ufa, Russia i HO.
Ilaina ny fizahana vaovao ny fotodrafitrasa alohan'ny hanomezana fankatoavana maika, hoy ny WHO.
Ny talen'ny mpanampy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) Jarbas Barbosa dia nanambara fa ny fampiakarana ny vaksinin'ny Sputnik V COVID-19 dia vonjimaika taorian'ny fikorontanan'ny famokarana OMS tany Russia.
Tale mpanampy ao amin'ny World Health Organization (WHO) Jarbas Barbosa
Nandritra ny fampahalalana ho an'ny mpanao gazety an'ny Pan American Health Organization, sampana iray an'ny WHO, Nilaza i Barbosa fa efa napetraka ny fizotry ny fankatoavana vonjy maika miandry ny fizahana vaovao ny iray amin'ireo orinasa Rosiana mpamokatra vaksinina.
“Ny fizotran'ny Sputnik VNiato ny lisitr'ireo fampiasana vonjy maika (EUL) satria raha nizaha ny zava-maniry anaovana ny vaksinina izy ireo dia nahita fa tsy nifanaraka tamin'ny fomba fanamboarana tsara indrindra ilay zavamaniry, ”hoy i Barbosa.
Taorian'ny famoahana ny fikarohana nataon'ny WHO, dia nilaza ny orinasa fa efa nandinika ny ahiahin'izy ireo izy ireo ary tsy nanontany tena momba ny fiarovana na ny fahombiazan'ny vaksinina ireo inspektera. Saingy, raha ny filazan'ny mpahay siansa tsy miankina sy ny indostrian'ny indostria dia mety hanimba ny kalitaon'ny vaksininy ny fandikana azy.
The World Health Organization dia nilaza fa mbola miandry fanavaozana ny Farmstandard ary nanolotra soso-kevitra ny hanaovana fanaraha-maso vaovao momba ireo fotodrafitrasa alohan'ny hanomezan'ny WHO fankatoavana an'i Sputnik V.
“Mila mandray izany ny mpamokatra amin'ny alàlan'ny torohevitra, manamboatra ny fanovana ilaina ary vonona ny hijerena vaovao. Miandry ny mpanamboatra handefa vaovao ny OMS fa mifanaraka amin'ny kaodin'izy ireo ny orinasa ", hoy i Barbosa.
Russia dia nametraka ny fangatahana fangatahana fankatoavana avy amin'ny OMS sy ny maso ivoho eropeana (EMA) tamin'ny volana feb.
Saingy nahitana olana maro ny tolotra.
Samy nilaza ny maso misahana ny fitsaboana eropeana (EMA) sy ny WHO tamin'ny herinandro lasa teo fa mbola miandry ny "antontan-kevitra feno" avy amin'ireo mpamorona ny Sputnik V izy ireo.
Ny fahazoana fankatoavana avy amin'ireo fikambanana roa ireo dia tena zava-dehibe ho an'i Russia, izay nandefa diplaomasia mahery vaika momba ny vaksiny ary namidy fatra an-tapitrisany tamin'ny firenena am-polony. Izy io koa dia hanokatra ny làlana ahafahan'ny tsirairay manaiky ny vaksininy, manamora ny fitsangatsanganana taorian'ny areti-mandringana ho an'ny Rosiana vita vaksiny Sputnik V.